किचेनमा खाना पकाउँदा महिला र पुरुष दुवैलाई उपयुक्त हुने केहि टिप्स जनिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
किचेनमा खाना पकाउँदा महिला र पुरुष दुवैलाई उपयुक्त हुने केहि टिप्स जनिराखाैँ
विशेष गरी दिनमा महिलाको आधाभन्दा बढी समय किचेनमै बित्ने गर्छ । खाना पकाउँदा साना साना कुराले पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ । कहिले तेल बढी हालिन्छ, कहिले नुन । कहिले खुर्सानी बढी हुन्छ त कहिले के । यहाँ दिइएका केहि टिप्स महिला पुरुष दुवैका लागि सहयोगी सावित हुन सक्छ ।
१. कागतीको प्रयोग गर्नुअघि आधा घन्टा पानीमा भिजाइदिनुस्, धेरै रस निस्कन्छ ।
२. फलिया बनाउनुभन्दा अघि बरफ भएको पानीमा भिजाइदिनुस्, तरकारी स्वादिष्ट बन्छ ।
३. तरकारीमा हरियो खुर्सानी हाल्ने बेला बियाँ निकालिदिनुस्, पीरो हट्छ, स्वाद मिठो आउँछ ।
४. कागती स्टोर गर्न रस ट्रेमा भरेर फ्रिजमा राखिदिनुस् । टुक्रा टुक्रा भएर जमेपछि प्लास्टिकमा राख्नुहोस् ।
५. तरकारीमा नुन बढी भएमा एउटा आलु काटेर हालिदिनुस्, ब्यालेन्समा आउँछ ।
६. पकौडाको मिश्रणमा एक टिस्पुज तातो तेल हालिदिनुस्, पकौडा नरम हुन्छ ।
७. कुकिज स्टोर गर्ने बेला डिब्बाको मुनि टिस्यु पेपर राखिदिनुस्, ज्यादा समय फ्रेस रहन्छ ।
८. च्याउ स्टोर गर्न प्लास्टिकको ब्यागको सट्टा पेपर ब्यागको प्रयोग गर्नुहोस्, लामो समयसम्म च्याउ फ्रेस रहन्छ ।
९. भिन्डी (रामतोरिया) को तरकारी बनाउने बेला थोरै दली हालिदिनुस, तरकारी भाँडामा लाग्दैन ।
१०. खुर्सानीको धूलो डिब्बामा भर्नुअघि थोरै हिंग हालिदिनुस्, कीरा लाग्दैन ।
११. दही जमाउने बेला थोरै नरिवलको टुक्रा राखिदिनुस्, धेरै समय ताजा रहन्छ ।
१२. पनिरलाई पानीमा राखेमा चाँडै खराब हुँदैन ।
१३. सुन्तला र टमाटरलाई दुई मिनेट तातो पानी र फेरि दुई मिनेट चिसो पानीमा हालिदिनुस् । टमाटर र सुन्तलाको केस्रा सजिलै आउँछ ।
१४. फ्रेन्च फाइस भुट्नुअघि आलु र थोरै मैदा हालिदिनुस्, क्रिस्पी बन्छ ।
१५. ब्राउन सुगरको प्लास्टिकको ब्यागमा हालेर फ्रिजमा राखिदिनुस्, चिनी आपसमा टाँसिदैन ।
हामी थरीथरीका परिकार बनाउँछौं । आगन्तुकको सत्कार गर्न आफ्नो भान्सामा पकाएको परिकार चखाउँछौं । हाम्राे घरमा पाहुना आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ । त्यसैले पाहुना आउनुअघि नै खानेकुरा तयार गरेर राख्न सहज लाग्छ हामीलाई ।
त्यसो त अन्य दिनमा पनि हामी खानेकुरा बनाएर राख्छौं, जो केही समय राखेर खाइन्छ । अहिले शहरिय क्षेत्रका कामकाजी दम्पतीले एक पटकमा दुई, तीन छाकका लागि खाना तयार गर्ने चलन पनि छ । आज बनाएको खाना बाँकी राखेर बेलुका वा अर्को बिहानसम्म खाने गरिन्छ । खाना पकाइरहने समयको बचत गर्न र झन्झटबाट मुक्त हुने काइदा हो यो ।
खानेकुरा जब विषालु बन्छ
धेरैजसो खानेकुरा जब पकाएर लामो समय राखिन्छ, त्यो खान योग्य हुँदैन । अर्थात पकाएर राखेको खाना केही समय राखेर सेवन गर्दा त्यसले भोक त मेट्छ, शरीरको आवश्यक्ता पुरा गर्दैन ।
दाल, भात, तरकारी, अचार आदि जो पकाइन्छ, यस्ता खानेकुरा निश्चित अवधीभित्र सेवन गरिसक्नुपर्छ । यदी त्यसो गरिएन भने हामी खानाको रुपमा विष सेवन गर्न पुग्छौं । किनभने लामो समय राखिएको खाना विषाक्त बन्ने प्रक्रियामा हुन्छ ।
पेट भर्ने कि पोषक तत्व प्राप्त गर्ने ?
तपाईं/हामीलाई थाहै छ, खाना खानु भनेको पेट भर्नु वा भोक मेट्नु मात्र होइन । जिब्रोको तलतले मेट्नु मात्र पनि होइन । हामीले खाने खाना खासमा शरीरको लागि हो । शरीरलाई स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त, उर्जावान र जीवित राख्नका लागि खाना अपरिहार्य मानिन्छ ।
हामीले खाने खाना यस्तो स्रोत हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ । प्रोटिन, क्याल्सिमय, भिटामिन, फाइबर, फलाम आदि तत्वहरु खानेकुराको माध्यामबाट प्राप्त हुन्छ । यी पोषक तत्व हाम्रो शरीरका लागि अनिवार्य हुन् ।
त्यसैले खानेकुरा सेवन गर्नु भनेको त्यसमा रहेको विभिन्न पोषक तत्व ग्रहण गर्नु हो । जब कुनैपनि खानेकुरा पकाएर लामो समय राखिन्छ, त्यसमा रहेको पोषक तत्व क्रमस नष्ट हुँदै जान्छ । त्यती मात्र होइन, रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा त्यो विषाक्त बन्दै जान्छ । त्यसैले निश्चित अवधीभन्दा लामो समय राखेर खाइएको खानाले शरीरलाई रोगी, जीर्ण बनाउँछ ।
खाना विषाक्त बनेपछि
पकाएको खानेकुरा जति जति समय गुजि्रदै जान्छ, उत्तिनै खराब हुँदै जान्छ । निश्चित अवधीपछि उक्त खानेकुरा सड्ने, गल्ने प्रक्रियामा जान्छ । त्यसपछि खानेकुरामा हानिकारक जीवाणुहरु बढ्न थाल्छ । यस्ता खानेकुरा शरीरमा नपच्ने मात्र होइन, हानिकारक समेत हुन्छ । खाना खराब हुँदै जाँदा त्यसमा रहेको ब्याक्टेरिया सात घण्टापछि एक लाख गुना बढ्न पुग्छ । यसले खानामा टक्सिन अर्थात विषाक्त तत्व बढाइदिन्छ ।
पकाउन नजान्दा पनि विषाक्त
चाडपर्वमा हामी खानेकुरा बनाएर लामो समय राख्छौं । कतिपय खानेकुरा पटक पटक तताएर खान्छौं । धेरैजसो खानेकुरा पुनः पकाउँदा पनि त्यो विषालु हुनपुग्छ । यस्ता खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्य खराब गर्छ । भित्री अंगहरु खासगरी कलेजो, मिर्गौला अदिको कार्य संचालनमा बाधा पुर्‍याउँछ ।
शरीरमा विभिन्न रोगको आक्रमण त्यही बेला हुन्छ, जतिबेला हाम्रो शरीरको कार्य क्षमता घट्छ । हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । शरीरभित्र विषाक्त तत्व बढ्न थाल्छ । र, यस्तो अवस्थामा आउनुमा खराब खानपान मूख्य हुन्छ ।
सकेसम्म ताजा वा पकाउनसाथ खानेकुरा सेवन गरौं । खानेकुरा पकाउने शैलीले पनि त्यसलाई पोषिलो राख्ने वा विषालु बनाउने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । हरेक खानाको प्रकृति अनुसार त्यसलाई पकाउने निश्चित विधी र समय हुन्छ । यसरी सबै कुरा मिलाएर पकाएको खानेकुरामा पोषक तत्व रहन्छ ।
जस्तो, हरियो सागपातमा फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ । तर, त्यही सागलाई लामो समय पकाइयो भने त्यसको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । दुधमा पनि क्याल्सियम, भिटामिन डि जस्ता थुप्रै किसिमका पोषक तत्व पाइन्छ । तर, दुधलाई निश्चित समयभन्दा बढी पकाइयो भने त्यसमा रहेको पोषक तत्व रहँदैन ।
कुनैपनि खानेकुरा कसरी पकाइन्छ वा त्यसमा के मिश्रण गरिन्छ भन्ने कुराले पनि पोषक तत्व कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्छ ।
खानेकुरालाई सही ढंगले भण्डारण गर्ने, पकाउने र खाने गर्नुपर्छ । यसरी खानेकुरा सेवन गर्दा त्यसमा रहेको पोषक तत्व शरीरले ग्रहण गर्छ । अन्याथा, खानेकुरा रोगको स्रोत बन्छ ।
भनिन्छ नि, संसारमा जति मानिस खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा दोब्बर खान नजानेर मर्छन् ।
हामी खाना किन खान्छौं ? आम जवाफ हो, ‘भोक मेट्न ।’
यद्यपी खाना त्यही स्रोत हो, जसले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व आपूर्ति गर्छ । अर्थात खानाबाट नै शरीरलाई चाहिने पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ । यसर्थ खाना खानु केवल भोक मेट्नु मात्र होइन, शरीरलाई जीवित, उर्जावान्, स्वस्थ, तन्दुरुस्त बनाइराख्न पनि हो ।
तर, हामी भोक मेट्नका खातिर खानेकुरा खान्छौं । स्वादका लागि खान्छौं । त्यही कारण यसमा कुन खानेकुरामा के पोषक तत्व पाइन्छ, त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई हेक्का छैन ।
प्रकृतिले हामीलाई यस्ता खानेकुरा दिएका छन्, जसले शरीरलाई बचाइराख्नका लागि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान गर्छ । हरेक खानेकुरामा आफ्नै किसिमको पोषक तत्व हुन्छ । ति पोषक तत्व सन्तुलित मात्रामा शरीरले ग्रहण गर्छ । सोही अनुरुप सन्तुलित खानपान गर्नुपर्छ । कति खानेकुरा पकाएर खाइन्छ, कतिपय काँचो खाइन्छ ।
स्वादका लागि पोषक तत्व किन नष्ट गर्ने ?
खानेकुरा पकाउँदा अक्सर हाम्रो ध्यान के हुन्छ भने, त्यसलाई कसरी स्वादिलो बनाउने ?
तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहि के कुरामा हो भने, कसरी त्यसको पोषक तत्वलाई सुरक्षित राख्ने ?
खानेकुरा विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । ति खानेकुरा पकाउँदा कसरी त्यसमा भएको पोषक तत्व सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राख्नैपर्छ । नभए त खाना खानु र भुस खानु एउटै हो, जसले पेट मात्र भर्छ । शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वका लागि पनि ठाउँ ओगट्छ ।
कसरी पकाउने खाना ?
खाना विभिन्न तरीकाले पकाइन्छ । कुनै खाना तारेर त कुनै उसिनेर पकाइन्छ । कुनै ग्रील गरिन्छ त कुनै हल्का फ्राई गरेर पकाइन्छ । खाना पकाउने तरीका पनि आ-आफ्नै हुन्छ ।
पोषक तत्व कसरी सुरक्षित राख्ने ?
खाना पकाउनु अघि र पकाउँदा खानामा रहेको पोषण तत्वलाई नष्ट हुन नदिन पनि यी कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
तेल, वटर लगायतका फ्याटको प्रयोग गर्ने-हरिया साजसब्जी थोरै आलोकाचो नै रहन दिने
खाना पकाउदा थोरै पानीको प्रयोग गर्ने
खानामा अमिलो मिसाउने
ताजा खाना खाने
खानामा फ्याक्ट प्रयोग बढाउने
मानिसहरु सोच्छन्, उमोलेको तथा स्टिम गरिएको खानेकुरामात्र स्वस्थकर हुन्छ । जबकी उमालेकै खानेकुरामा थोरै मात्र फ्याट वा चिल्लो मिसाउनाले पनि खानामा भएको पौष्टिक तत्व अझै बढ्ने गर्छ । फ्याटले खानाबाट मिल्ने पोषण अवशोषित गर्नमा शरीरलाई सहायता प्रदान गर्दछ । यसले खानाको स्वाद बढाउन समेत निकै मद्दत गर्दछ ।
केही सब्जी काच्चै राख्ने
खाना पकाउँदा पानीको प्रयोग गर्ने
खानामा अमिलो समावेश गर्ने
Don't Miss it यस्ता रोगीले भटमासको कुनै पनि परिकार सेवन नगर्नुहाेस्
Up Next खैरो र सेतोमध्ये कुन अण्डाले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ ? जानिराखाैँ
१. पिनट बटरः पिनट बटरमा अत्याधिक मात्रामा फ्याट हुन्छ जसले एलर्जी हुन सक्छ र मानिसको स्वास्थमा असर गर्न सक्छ । २.…